သတင်း – Page2– Shangyimm
ရနျကုနျမွို့အတှငျး စီးနငျးခှငျ့မပွုသညျ့ မွို့နယျမှာ ကားနှငျ့ဆိုငျကယျ မတျောတဆဖွဈခဲ့ရငျ
Posted on January 14, 2021 January 14, 2021 by Shangyi
ရနျကုနျမွို့အတှငျး စီးနငျးခှငျ့မပွုသညျ့ မွို့နယျမှာ ကားနှငျ့ဆိုငျကယျ မတျောတဆဖွဈခဲ့ရငျ
ရနျကုနျမွို့တျော နယျနမိတျအတှငျး စီးနငျးခှငျမပွုသညျ့ မွို့နယျတို့၌ ကားနှငျ့ဆိုငျကယျ မတျောတဆမှုဖွဈခဲ့သျော ဘယျလိုအရေးယူမလဲဆိုရငျ မေးလာကွတဲ့ ယာဉျမောငျးတှေ အတျောမြားလာတာမို့ ထပျပွီး ရှငျးလငျးဖွကွေားပါရစေ။ မျောတျောဆိုငျကယျမစီးရနယျမွမှောစီးနငျးခဲ့ရငျ ဒီလိုမြိုးအရေးယူပါတယျ ဥပမာပေါ့ မစီးရ နယျမွမှော စီးနငျးလို့ နယျကြျောလို့ ဆိုငျကယျမှာ လိုငျစငျမရှိ without ဖွဈလို့ စတာတှနေဲ့ သကျဆိုငျသလို အရေးယူပါတယျ။ ယာဉျမတျောတဆမှုဖွဈခဲ့ရငျတော့ သကျဆိုငျရာယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျး ပုဒျမတို့နဲ့ အရေးယူပါတယျ။ ဆိုငျကယျနဲ့ ကားနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ဆိုငျကယျနဲ့ လမျးလြှောကျသူနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ယာဉျ/လမျးစညျးကမျးခြိုဖေါကျတဲ့ ယာဉျမောငျးကိုပဲ အရေးယူပါတယျ။
ဒီနရောမှာ အမြားစု စိတျထဲစှဲမှတျနတောက မစီးရနယျမွမှော စီးတဲ့ဆိုငျကယျသာလြှငျ ဘယျလိုဆိုဆို မှားတာလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါကိုကြှနျတျောက ဘယျ၍ဘယျမြှ မညျသို့မညျပုံရယျလို့ ဘာမှ ဝငျမဆှေးနှေးလိုပါဘူး။ တဈခုပဲ အဲ့ဒီလိုထငျမှတျထားပွီး မတျောတဆ ဖွဈခဲ့လို့ရှိရငျ ထငျမှတျထားသလို ဖွဈမလာဘဲ မိမိအရေးယူခံလိုကျရမှာကို မဖွဈစလေိုတာမို့ ဒီလိုတော့ရှိတယျဆိုတာလေး ပွောပွခွငျးသာဖွဈပါတယျ။ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈလို့အရေးယူတာကတပိုငျး၊ မစီးရနယျမှာ စီးလို့အရေးယူမှာက တပိုငျးပါ။ ယာဉျမောငျးကောငျးတဈယောကျအနဖွေငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျလဲ ဘယျယာဉျ စညျးကမျးဖေါကျဖေါကျ မိမိစညျးကမျးလိုကျနာဖို့သာ အဓိကပါ။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း စီးနင်းခွင့်မပြုသည့် မြို့နယ်မှာ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ် မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင်
ရန်ကုန်မြို့တော် နယ်နမိတ်အတွင်း စီးနင်းခွင်မပြုသည့် မြို့နယ်တို့၌ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ် မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့သော် ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုရင် မေးလာကြတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ အတော်များလာတာမို့ ထပ်ပြီး ရှင်းလင်းဖြေကြားပါရစေ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မစီးရနယ်မြေမှာစီးနင်းခဲ့ရင် ဒီလိုမျိုးအရေးယူပါတယ် ဥပမာပေါ့ မစီးရ နယ်မြေမှာ စီးနင်းလို့ နယ်ကျော်လို့ ဆိုင်ကယ်မှာ လိုင်စင်မရှိ without ဖြစ်လို့ စတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်သလို အရေးယူပါတယ်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ပုဒ်မတို့နဲ့ အရေးယူပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်နဲ့ လမ်းလျှောက်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းချိုဖေါက်တဲ့ ယာဉ်မောင်းကိုပဲ အရေးယူပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အများစု စိတ်ထဲစွဲမှတ်နေတာက မစီးရနယ်မြေမှာ စီးတဲ့ဆိုင်ကယ်သာလျှင် ဘယ်လိုဆိုဆို မှားတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်က ဘယ်၍ဘယ်မျှ မည်သို့မည်ပုံရယ်လို့ ဘာမှ ဝင်မဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ တစ်ခုပဲ အဲ့ဒီလိုထင်မှတ်ထားပြီး မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် ထင်မှတ်ထားသလို ဖြစ်မလာဘဲ မိမိအရေးယူခံလိုက်ရမှာကို မဖြစ်စေလိုတာမို့ ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့အရေးယူတာကတပိုင်း၊ မစီးရနယ်မှာ စီးလို့အရေးယူမှာက တပိုင်းပါ။ ယာဉ်မောင်းကောင်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်ယာဉ် စည်းကမ်းဖေါက်ဖေါက် မိမိစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့သာ အဓိကပါ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ရနျကုနျမွို့အတှငျး စီးနငျးခှငျ့မပွုသညျ့ မွို့နယျမှာ ကားနှငျ့ဆိုငျကယျ မတျောတဆဖွဈခဲ့ရငျ
အသညျးအဆီဖုံး၊ ဆီးခြိူ သှေးတိုး၊ ဝမျးပကျြဝမျးလြှော စတဲ့ရောဂါတှအေတှကျ အစှမျးထကျတဲ့ ကွာသီး ကွာစေ့
Posted on January 14, 2021 January 14, 2021 by Tin Mg Shwe
ကွာပနျးပှငျ့လို့ ကွာသီးသီးရငျ ခူးစားဖွဈကွလားရှငျ့။ ကွာသီး/ ကွာစပေ့ျေါခြိနျဆိုရငျ ခူးပွီးရောကျတာတှရေ့ပါတယျ။ အဲလိုရောငျးရငျကောဝယျစားဖွဈရဲ့လား။ ကွာသီးကို အပျေါကအခှံခှာပွီး အထဲကအစကေို့စားရတာဟာ ခြိုစိမျ့လေးနဲ့ တမြိုးလေးအရသာရှိပါတယျ။ကွာသီးမှာ Antioxidant တှကွှေယျဝစှာပါဝငျပွီး ရောငျရမျးမှုကိုသကျသာစသေလို အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို တားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။ သှေးတိုးရှိသူတှလေညျး သှေးကစြဖေို့ စားသုံးပေးနိုငျတဲ့အသီးပါ။ ကွာသီး/ကွာစရေဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
အိပျမပြျောခွငျးကို_ကုသပေးတယျ – အိပျမပြျောတာ မကွာခဏဆိုသလိုနိုးတာဟာ အသကျကွီးတဲ့သူတှေ၊ အလုပျမြား စိတျဖိစီးမှုမြားသူတှမှောဖွဈလရှေိ့ပွီး ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ မြားစှာရှိစပေါတယျ။ ကွာသီးကိုစားပေးတာဟာ အိပျမပြျောတာကိုကုသပေးပွီး ကောငျးမှနျစှာအိပျစကျအနားယူစပေါတယျ။
ဆီးခြိုလူနာတှအေတှကျ – ကယျလိုရီပါဝငျမှုနညျးပွီး အမြှငျဓါတျပါဝငျမှုမြားတာကွောငျ့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျပါဝငျမှုကို လြှော့ကစြပေါတယျ။ အရသာရှိတဲ့သရစောအဖွဈစားသုံးပေးနိုငျပါတယျ။ အိုမငျးရငျ့ရောကျမှုကိုတားဆီးပေးခွငျး – ကွာစေ့/ကွာသီးဟာ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကိုတားဆီးပေးနိုငျတဲ့အငျဇိုငျးဓါတျတဈမြိုးပါဝငျပွီး ပကျြဆီးသှားတဲ့ ပရိုတငျးဓါတျတှကေို ပွနျလညျပွုပွငျပေးပါတယျ။
၀မျးပကျြခွငျးကိုကုသပေးခွငျး – အရသာရှိတဲ့ ကွာသီးဟာ ဝမျးလြှောဝမျးပကျြတာကို သကျသာစပေါတယျ။
သှေးဖိအားကစြခွေငျး – သှေးတိုးရှိတဲ့သူတှေ စားပေးလို့ရပါတယျ။
ဆီးဆိုငျရာပွဿနာတှကေိုကုသပေးခွငျး – ဆီးလမျးကွောငျးဆိုငျရာပွဿနာတှကေို ကုသပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ကွာစေ့/ကွာသီးကိုစားပေးနိုငျပါတယျ။
သှားဖုံးရောဂါ – သှားဖုံးဆိုငျရာ ပွဿနာတှအေတှကျ ကွာစေ့/ကွာသီးကိုစားပေးနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျစားပေးမယျဆိုရငျ သှားဖုံးနဲ့ဆိုငျရာ တခွားပွဿနာတှကေို ကုသပေးနိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ – ပရိုတငျးဓါတျကွှယျဝစှာပါဝငျလို့ အာရုံကွောစနဈနဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးတှေ သရစေားအဖွဈစားပေးနိုငျပါတယျ။
အသညျးကိုကနျြးမာစခွေငျး – အသညျးအဆီဖုံးတာတို့လိုအသညျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပွဿနာတှကေို တားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။
ဆီးခြိုလူနာတှအေတှကျ – ကယျလိုရီပါဝငျမှုနညျးပွီး အမြှငျဓါတျပါဝငျမှုမြားတာကွောငျ့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျပါဝငျမှုကို လြှော့ကစြပေါတယျ။ အရသာရှိတဲ့သရစောအဖွဈစားသုံးပေးနိုငျပါတယျ။
အိုမငျးရငျ့ရောကျမှုကိုတားဆီးပေးခွငျး – ကွာစေ့/ကွာသီးဟာ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကိုတားဆီးပေးနိုငျတဲ့အငျဇိုငျးဓါတျတဈမြိုးပါဝငျပွီး ပကျြဆီးသှားတဲ့ ပရိုတငျးဓါတျတှကေို ပွနျလညျပွုပွငျပေးပါတယျ။
အသည်းအဆီဖုံး၊ ဆီးချိူ သွေးတိုး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော စတဲ့ရောဂါတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ ကြာသီး ကြာစေ့
ကြာပန်းပွင့်လို့ ကြာသီးသီးရင် ခူးစားဖြစ်ကြလားရှင့်။ ကြာသီး/ ကြာစေ့ပေါ်ချိန်ဆိုရင် ခူးပြီးရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။ အဲလိုရောင်းရင်ကောဝယ်စားဖြစ်ရဲ့လား။ ကြာသီးကို အပေါ်ကအခွံခွာပြီး အထဲကအစေ့ကိုစားရတာဟာ ချိုစိမ့်လေးနဲ့ တမျိုးလေးအရသာရှိပါတယ်။ကြာသီးမှာ Antioxidant တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေသလို အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးရှိသူတွေလည်း သွေးကျစေဖို့ စားသုံးပေးနိုင်တဲ့အသီးပါ။ ကြာသီး/ကြာစေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
အိပ်မပျော်ခြင်းကို_ကုသပေးတယ် – အိပ်မပျော်တာ မကြာခဏဆိုသလိုနိုးတာဟာ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ၊ အလုပ်များ စိတ်ဖိစီးမှုများသူတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ များစွာရှိစေပါတယ်။ ကြာသီးကိုစားပေးတာဟာ အိပ်မပျော်တာကိုကုသပေးပြီး ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနားယူစေပါတယ်။
ဆီးချိုလူနာတွေအတွက် – ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ကျစေပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့သရေစာအဖြစ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရောက်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်း – ကြာစေ့/ကြာသီးဟာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အင်ဇိုင်းဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး ပျက်ဆီးသွားတဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ်။
၀မ်းပျက်ခြင်းကိုကုသပေးခြင်း – အရသာရှိတဲ့ ကြာသီးဟာ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
သွေးဖိအားကျစေခြင်း – သွေးတိုးရှိတဲ့သူတွေ စားပေးလို့ရပါတယ်။
ဆီးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကုသပေးခြင်း – ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ကုသပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကြာစေ့/ကြာသီးကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားဖုံးရောဂါ – သွားဖုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေအတွက် ကြာစေ့/ကြာသီးကိုစားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင် သွားဖုံးနဲ့ဆိုင်ရာ တခြားပြဿနာတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် – ပရိုတင်းဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ အာရုံကြောစနစ်နဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ သရေစားအဖြစ်စားပေးနိုင်ပါတယ်။
အသည်းကိုကျန်းမာစေခြင်း – အသည်းအဆီဖုံးတာတို့လိုအသည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုလူနာတွေအတွက် – ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ကျစေပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့သရေစာအဖြစ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
အိုမင်းရင့်ရောက်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်း – ကြာစေ့/ကြာသီးဟာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အင်ဇိုင်းဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး ပျက်ဆီးသွားတဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ်။
Posted in သတင်း LeaveaComment on အသညျးအဆီဖုံး၊ ဆီးခြိူ သှေးတိုး၊ ဝမျးပကျြဝမျးလြှော စတဲ့ရောဂါတှအေတှကျ အစှမျးထကျတဲ့ ကွာသီး ကွာစေ့
Posted on January 13, 2021 January 13, 2021 by Tin Mg Shwe
ရှကျကပြငျပေါကျအရှကျကို၊ မီးကငျပွီး ရောငျနသေော ခွဖေမိုးပျေါ နှမျးဆီပါးပါး သုတျ၍ အရှကျခပျနှေးနှေး အနအေထားမှာ ကပျပေးပါ။ ပထမတဈရကျနှငျ့ပငျ ပြောကျသလောကျရှိ၍ ငါးရကျခနျ့ ကပျပေးပါက လုံးဝသကျသာပြောကျကငျးပါသညျ။ ရှကျကပြငျပေါကျ၏ စှမျးအငျ – မွနျမာ့ဆေးကမျြးမြားအလိုအရ ၎င်းငျးဆေးပငျသညျ အနာမြားကိုစငျ ကွယျအောငျသုတျသငျတတျ၏။
အသားနုတကျစတေတျ၏။ သှေးမြားကို ခြုပျစေ၏။ သှေးကွောငယျမြားတှငျ မြားစှာအကြိုးပွု ၏။သှေးကွောငယျမြားကို တှနျ့ခွငျး၊ ရှူံ့ခွငျးဖွဈစတေတျသဖွငျ့ အရပွေားမှ လညျးကောငျး၊ ဝမျးသှားရာမှလညျးကောငျး ၊မွငျးသရိုကျရောဂါမှလညျးကောငျး၊ နှာခေါငျး၊ပါးစပျ၊ ခံတှငျးမှလညျးကောငျး ယိုကသြောသှေးမြားကို လြှငျမွနျစှာ ခြုပျတညျးစနေိုငျ၏။
ရှကျကပြငျပေါကျဖွငျ့ ကုသနိုငျသောရောဂါမြားအနကျ ယိုစီးကသြောသှေးမြားကိုရပျတနျ့စရောတှငျ နတျဆေးသဖှယျစှမျး၏။ ထိခိုကျရှနာနှငျ့ သှေးစိမျးထှကျသောအနာမြားကို ရှကျကပြငျ ပေါကျ မီးကငျ၍ကပျပေးပါက၊ သှေးမြားရပျစဲ၍အနာကကျြလှယျ၏။ ထိခိုကျရောငျရမျးသောဒဏျရာမြားကို မီးကငျ၍ကပျပေးပါက ရောငျရမျးခွငျးကဆြငျး၌ ဒဏျရာမြားသကျသာပြောကျ ကငျး ၏။မီးလောငျနာ၊ အဆဈလှဲ အကွောထုံးခွငျးမြားအတှကျ၊ အရှကျကွိတျရညျ လိမျးပေးပါက သကျသာပြောကျကငျး၏။သှေးကြ၍ ခွဖေမိုးရောငျသူမြား၊ ဖောရောငျနသေောနရောကို အရှကျမီးကငျ၍ကပျပေးပါက အဖောအရောငျကြ၏။
ရွက်ကျပင်ပေါက်အရွက်ကို၊ မီးကင်ပြီး ရောင်နေသော ခြေဖမိုးပေါ် နှမ်းဆီပါးပါး သုတ်၍ အရွက်ခပ်နွေးနွေး အနေအထားမှာ ကပ်ပေးပါ။ ပထမတစ်ရက်နှင့်ပင် ပျောက်သလောက်ရှိ၍ ငါးရက်ခန့် ကပ်ပေးပါက လုံးဝသက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။ ရွက်ကျပင်ပေါက်၏ စွမ်းအင် – မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများအလိုအရ ၎င်းဆေးပင်သည် အနာများကိုစင် ကြယ်အောင်သုတ်သင်တတ်၏။
အသားနုတက်စေတတ်၏။ သွေးများကို ချုပ်စေ၏။ သွေးကြောငယ်များတွင် များစွာအကျိုးပြု ၏။သွေးကြောငယ်များကို တွန့်ခြင်း၊ ရှူံ့ခြင်းဖြစ်စေတတ်သဖြင့် အရေပြားမှ လည်းကောင်း၊ ဝမ်းသွားရာမှလည်းကောင်း ၊မြင်းသရိုက်ရောဂါမှလည်းကောင်း၊ နှာခေါင်း၊ပါးစပ်၊ ခံတွင်းမှလည်းကောင်း ယိုကျသောသွေးများကို လျှင်မြန်စွာ ချုပ်တည်းစေနိုင်၏။
ရွက်ကျပင်ပေါက်ဖြင့် ကုသနိုင်သောရောဂါများအနက် ယိုစီးကျသောသွေးများကိုရပ်တန့်စေရာတွင် နတ်ဆေးသဖွယ်စွမ်း၏။ ထိခိုက်ရှနာနှင့် သွေးစိမ်းထွက်သောအနာများကို ရွက်ကျပင် ပေါက် မီးကင်၍ကပ်ပေးပါက၊ သွေးများရပ်စဲ၍အနာကျက်လွယ်၏။ ထိခိုက်ရောင်ရမ်းသောဒဏ်ရာများကို မီးကင်၍ကပ်ပေးပါက ရောင်ရမ်းခြင်းကျဆင်း၌ ဒဏ်ရာများသက်သာပျောက် ကင်း ၏။မီးလောင်နာ၊ အဆစ်လွှဲ အကြောထုံးခြင်းများအတွက်၊ အရွက်ကြိတ်ရည် လိမ်းပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်း၏။သွေးကျ၍ ခြေဖမိုးရောင်သူများ၊ ဖောရောင်နေသောနေရာကို အရွက်မီးကင်၍ကပ်ပေးပါက အဖောအရောင်ကျ၏။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ခွဖေမိုးရောငျရမျးခွငျးနှငျ့ ရှကျကပြငျပေါကျ
သှားနာ၊သှားကိုကျ၊သှားယိုငျ၊သှားဖုံးနာ သှားသှေးယိုစိမျ့ခွငျးအတှကျ စိတျညဈဖှယျ ကောငျးအောငျ သှားကိုကျ၊ သှားနာခွငျးကွုံရ၏။ သှာဆေးခနျး မကွာခဏ သှားရသောကွောငျ့ သှားဆရာဝနျနှငျ့ပငျ ဖောကျသညျဖွဈရကာ ရငျးနှီးခငျမငျနတေော့သညျ။ ဖွဈလတေိုငျး အင်ျဂလိပျဆေးက စှမျးပါဘိ။ သှားနုတျ၊သှားဖာ၊ဆေးထိုး ဆေးသောကျဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျးရသညျသာ။
မကွာမီ သှားကိုကျ၊သှားနာပွနျဖွဈပွနျသညျ။ မွနျမာတိုငျးရငျးဆေးနညျးလေးမြားကို အထငျမသေးမိရနျ အကွောငျးတဈခုဖနျလာသညျ။ ထိုသညျက မနျကညျြးစခှေံ့နှငျ့ ကြောကျခဉျြသာဖွဈတော့၏။
မနျကညျြးစေ့ အရငျ့အစေ့(၃၀)ကို ဒယျအိုးတှငျထညျ့၍ မီးဖွငျ့ ကြှမျးအောငျလှျောလိုကျပွီးမနျကညျြးစေ့၏ အစခှေံ့ ယူရ၏။ မနျကညျြးစေ့ အတှငျးသားအဖွူကို မသုံးရပါ။ မနျကညျြးစအေ့ခှံအကြှမျးလှျောကို အမှုနျ့ပွု၍ထားပါ။ ထိုနောကျ ကြောကျခဉျြ(၁)မတျသား တိတိကို ခှကျငယျတဈခုတှငျတငျ ၍မီးဖုတျပါ။ ငါးမှုနျ့ကွျောသကဲ့သို့ ဖောငျးမို့တကျလာပါက အအေးခံပွီးကြောကျခဉျြ မီးဖုတျကို အမှုနျ့ပွုပါ။ မနျကညျြးစအေ့ခှံ မီးကြှမျးအလှျော အမှုနျ့ထောငျးနှငျ့ကြောကျခဉျြ မီးဖုတျအမှုနျ့ကို ရောစပျ၍ လလေုံသော ဗူးငယျတှငျထညျ့ထားပါ။ သှားနာ၊သှားကိုကျ၊ သှားယိုငျ၊ သှားဖုံးနာနှငျ့သှားသှေးယိုစိမျ့ခွငျးဖွဈပါက ထိုဆေးမှုနျ့ကို သိပျပေးပါ။ အမွနျဆုံး သကျသာပြောကျကငျးပါကွောငျး။
သှားခိုငျစရေနျ ကြောကျခဉျြနှငျ့ငရုတျကောငျးစကေို့ ဆတူရောပွီး သံဆုံတှငျညကျအောငျထောငျး၍ နံနကျအိပျရာထတိုငျး သှားတိုကျပေးပါ။
သွားနာ၊သွားကိုက်၊သွားယိုင်၊သွားဖုံးနာ သွားသွေးယိုစိမ့်ခြင်းအတွက် စိတ်ညစ်ဖွယ် ကောင်းအောင် သွားကိုက်၊ သွားနာခြင်းကြုံရ၏။ သွာဆေးခန်း မကြာခဏ သွားရသောကြောင့် သွားဆရာဝန်နှင့်ပင် ဖောက်သည်ဖြစ်ရကာ ရင်းနှီးခင်မင်နေတော့သည်။ ဖြစ်လေတိုင်း အင်္ဂလိပ်ဆေးက စွမ်းပါဘိ။ သွားနုတ်၊သွားဖာ၊ဆေးထိုး ဆေးသောက်ဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းရသည်သာ။
မကြာမီ သွားကိုက်၊သွားနာပြန်ဖြစ်ပြန်သည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးနည်းလေးများကို အထင်မသေးမိရန် အကြောင်းတစ်ခုဖန်လာသည်။ ထိုသည်က မန်ကျည်းစေ့ခွံနှင့် ကျောက်ချဉ်သာဖြစ်တော့၏။
မန်ကျည်းစေ့ အရင့်အစေ့(၃၀)ကို ဒယ်အိုးတွင်ထည့်၍ မီးဖြင့် ကျွမ်းအောင်လှော်လိုက်ပြီးမန်ကျည်းစေ့၏ အစေ့ခွံ ယူရ၏။ မန်ကျည်းစေ့ အတွင်းသားအဖြူကို မသုံးရပါ။ မန်ကျည်းစေ့အခွံအကျွမ်းလှော်ကို အမှုန့်ပြု၍ထားပါ။ ထိုနောက် ကျောက်ချဉ်(၁)မတ်သား တိတိကို ခွက်ငယ်တစ်ခုတွင်တင် ၍မီးဖုတ်ပါ။ ငါးမှုန့်ကြော်သကဲ့သို့ ဖောင်းမို့တက်လာပါက အအေးခံပြီးကျောက်ချဉ် မီးဖုတ်ကို အမှုန့်ပြုပါ။ မန်ကျည်းစေ့အခွံ မီးကျွမ်းအလှော် အမှုန့်ထောင်းနှင့်ကျောက်ချဉ် မီးဖုတ်အမှုန့်ကို ရောစပ်၍ လေလုံသော ဗူးငယ်တွင်ထည့်ထားပါ။ သွားနာ၊သွားကိုက်၊ သွားယိုင်၊ သွားဖုံးနာနှင့်သွားသွေးယိုစိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုဆေးမှုန့်ကို သိပ်ပေးပါ။ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပါကြောင်း။
သွားခိုင်စေရန် ကျောက်ချဉ်နှင့်ငရုတ်ကောင်းစေ့ကို ဆတူရောပြီး သံဆုံတွင်ညက်အောင်ထောင်း၍ နံနက်အိပ်ရာထတိုင်း သွားတိုက်ပေးပါ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on လကျတှသှေ့ားရောဂါအတှကျ ဆေးတဈလကျ
အသီးတှေ လှီးဖွတျထားတာကွာရငျ အာဟာရဓာတျဆုံးရှုံးနိုငျလား
Posted on January 12, 2021 January 12, 2021 by Shangyi
လူတှကေ စားလို့မကုနျလို့ ကနျြနတေဲ့ လှီးဖွတျပွီးသား အသီးအနှံတှကေို ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ပွီးသိမျးထားကာ နောကျရကျတှမှေစားရငျ အာဟာရဓာတျတှေ ဆုံးရှုံးသှားတယျလို့ ထငျနကွေပါတယျ။
တကယျတော့ လှီးဖွတျပွီးထုပျပိုးထားတဲ့ သဈသီးဝလံမြားဟာ ဒီတိုငျးထားရငျ ထူးပွီး အာဟာရဓာတျဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူးတဲ့။
လလေ့ာသူ သုတသေီတှကေ ကီဝီသီး၊ စတျောဘယျရီသီး၊ နာနတျသီးနဲ့ ဖရဲသီး အလုံးလိုကျတှရေဲ့ အာဟာရဓာတျပါဝငျမှုကို ဓာတျခှဲမှတျတမျးတငျခဲ့ပါတယျ။
ပွီးတော့ အလုံးလိုကျနဲ့ လှီးဖွတျပွီးသားမြားကို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ (၆) ရကျကွာ ထားခဲ့ပါတယျ။
(၆) ရကျကွာပွီးနောကျ အလုံးလိုကျအသီးတှကေ လှီးဖွတျပွီးထားတဲ့ အတုံးမြားထကျ လတျဆတျပုံပေါကျပမေဲ့ နှဈမြိုးစလုံးမှာ လြော့နညျးသှားတဲ့ ဗီတာမငျဓာတျမြားရဲ့ ပမာဏကတော့ အတူတူပဲဖွဈပါတယျတဲ့။
လှီးဖွတျထားတဲ့ သဈသီးတုံးတှကေ အာဟာရဓာတျတနျဖိုး တကယျမဆုံးရှုံးမီမှာပဲ အမွငျမှာ ပကျြစီးပုံရပါတယျလို့ ထိုလလေ့ာမှုမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
အသီးတွေ လှီးဖြတ်ထားတာကြာရင် အာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်လား
လူတွေက စားလို့မကုန်လို့ ကျန်နေတဲ့ လှီးဖြတ်ပြီးသား အသီးအနှံတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးသိမ်းထားကာ နောက်ရက်တွေမှစားရင် အာဟာရဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ လှီးဖြတ်ပြီးထုပ်ပိုးထားတဲ့ သစ်သီးဝလံများဟာ ဒီတိုင်းထားရင် ထူးပြီး အာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူးတဲ့။
လေ့လာသူ သုတေသီတွေက ကီဝီသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ နာနတ်သီးနဲ့ ဖရဲသီး အလုံးလိုက်တွေရဲ့ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုကို ဓာတ်ခွဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ အလုံးလိုက်နဲ့ လှီးဖြတ်ပြီးသားများကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ (၆) ရက်ကြာ ထားခဲ့ပါတယ်။
(၆) ရက်ကြာပြီးနောက် အလုံးလိုက်အသီးတွေက လှီးဖြတ်ပြီးထားတဲ့ အတုံးများထက် လတ်ဆတ်ပုံပေါက်ပေမဲ့ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ လျော့နည်းသွားတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်များရဲ့ ပမာဏကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
လှီးဖြတ်ထားတဲ့ သစ်သီးတုံးတွေက အာဟာရဓာတ်တန်ဖိုး တကယ်မဆုံးရှုံးမီမှာပဲ အမြင်မှာ ပျက်စီးပုံရပါတယ်လို့ ထိုလေ့လာမှုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit Health Digest
Posted in သတင်း LeaveaComment on အသီးတှေ လှီးဖွတျထားတာကွာရငျ အာဟာရဓာတျဆုံးရှုံးနိုငျလား
Posted on December 28, 2020 December 28, 2020 by Shangyi
1. ဆေးဘကျဝငျ အရှကျ
ကိုကျလနျမှာ လူကို ဆိုးကြိူးပေးတဲ့ ကယျလိုရီပမာဏ ပါဝငျမှု နညျးပါတယျ၊ ဒါ့အပွငျ အဆီဓာတျ လုံဝမပါလို့ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျစပေါတယျ။ နောကျပွီး အမြှငျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျလို့လညျးအသားအရနေဲ့ ၀မျးဗိုကျပိုငျး ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးမှနျပါတယျ။
2. အကြိုးပွု သံဓာတျ
အမြိုးသမီးမြား လစဉျ ဓမ်မတာလာမှုကွောငျ့ သံဓာတျအားနညျးနတေယျဆိုရငျ ကိုကျလနျကိုသာ စားသုံးပေးခွငျး
က သဘာဝသံဓာတျအားတိုးဆေးကွီး ဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသားတှအေတှကျလညျး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးပွုတဲ့ ဓာတျကွီးမို့ လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး။ ကိုကျလနျမှာ ပါဝငျတဲ့ သံဓာတျက အသားတှမှော ပါတဲ့ သံဓာတျထကျပမာဏပိုမြားပါတယျ။
3. အကြိုးပွု ဗီတာမငျ K
အလှနျရှားပါတဲ့ ဗီတာမငျ K ကို ကိုကျလနျထဲမှာ အမွောကျအမြား တှရေ့ပါတယျ။ ဗီတာမငျ K ကငျဆာရောဂါမြိုးစုံကို ကာကှယျပေးပွီး အရိုးကနျြးမာရေးနဲ့ သှေးကွောပိတျခွငျးကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဒါအပွငျမှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျးဆိုတဲ့ အယျလျဇိုငျးမား ရောဂါကိုလညျး ကာကှယျပေးပတယျ။
4. သဘာဝအစှမျးထကျ ဓာတျသဘာဝတှေ ပါဝငျတယျ
ကငျဆာရောဂါမြိူးစုံကို ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ carotenoid နဲ့ flavonoid ကဲ့သို့သော သဘာဝဓာတျတှေ ပါဝငျတာကလညျး ကနျြးမာရေးအတှကျ အထူး အကြိုးရှိပါတယျ။
5. နာတာရှညျရောဂါတှေ အတှကျကောငျး
ကိုကျလနျမှာ omega-3 fatty acids ရဲ့ RDA 10% ထိ ပါဝငျလို့ ပုံမှနျစားသုံးပါက အဆဈအမွဈယောငျ ရောဂါ၊ပနျးနာရောဂါ၊ ကယောငျခွောကျခွား ရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
6. နှလုံးရောဂါကို ကာကှယျပေးတယျ
ကိုကျလနျမြားမြား စားပေးပါက နှလုံးရောဂါရှငျတှအေတှကျ သကျသာ ပြောကျကငျးစပွေီး မဖွဈသေးသူတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။ ကိုလကျစထရောဓာတျကို လြှော့ခစြနေိုငျတဲ့ ဟငျးလြှာဖွဈပါတယျ။
7. ကိုကျလနျမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျ A
အမွငျအာရုံကို ကောငျးမှနျစတေဲ့ ဗီတာမငျ A ဟာ အသားအရညျကိုလညျး ခြောမှတျသနျ့စငျစသေလို အဆုတျကငျဆာ၊ သာအိမျခေါငျးကငျဆာရောဂါတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
8. ကိုကျလနျမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျ C
ဗီတာမငျ C ဟာ သှေးဖိအားကို ထိနျးညှိပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ စှမျးအားတှလေညျး ပေးပါတယျ။ အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစလေို့ ၀ိတျကိုလညျး ကစြပေါတယျ။
9. မွငျ့မားတဲ့ ကယျလျစီယမျ
ကိုကျလနျရဲ့ ထူးခွားခကျြက နှားနို့ထကျပငျ ကယျလျစီယမျ ပါဝငျမှု ပိုမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရိုးကနျြးမာရေးကိုကောငျးစပွေီး osteoporosis ကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
ကိုကျလနျမှာ အမြှငျဓာတျနဲ ဆာလဖာဓာတျ ပါဝငျလို့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျး အဆိပျအတောကျ ၀ငျရောကျမှုကို ကာကှယျပေးပွီး အသဲကနျြမာရေးကိုလညျး အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ကိုက်လန်မှာ လူကို ဆိုးကျိူးပေးတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏ ပါဝင်မှု နည်းပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် အဆီဓာတ် လုံဝမပါလို့ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့လည်းအသားအရေနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ လစဉ် ဓမ္မတာလာမှုကြောင့် သံဓာတ်အားနည်းနေတယ်ဆိုရင် ကိုက်လန်ကိုသာ စားသုံးပေးခြင်း
က သဘာဝသံဓာတ်အားတိုးဆေးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ ဓာတ်ကြီးမို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။ ကိုက်လန်မှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓာတ်က အသားတွေမှာ ပါတဲ့ သံဓာတ်ထက်ပမာဏပိုများပါတယ်။
အကျိုးပြု ဗီတာမင် K
အလွန်ရှားပါတဲ့ ဗီတာမင် K ကို ကိုက်လန်ထဲမှာ အမြောက်အများ တွေ့ရပါတယ်။ ဗီတာမင် K ကင်ဆာရောဂါမျိုးစုံကို ကာကွယ်ပေးပြီး အရိုးကျန်းမာရေးနဲ့ သွေးကြောပိတ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါအပြင်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းဆိုတဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပတယ်။
သဘာဝအစွမ်းထက် ဓာတ်သဘာဝတွေ ပါဝင်တယ်
ကင်ဆာရောဂါမျိူးစုံကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ carotenoid နဲ့ flavonoid ကဲ့သို့သော သဘာဝဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထူး အကျိုးရှိပါတယ်။
ကိုက်လန်မှာ omega-3 fatty acids ရဲ့ RDA 10% ထိ ပါဝင်လို့ ပုံမှန်စားသုံးပါက အဆစ်အမြစ်ယောင် ရောဂါ၊ပန်းနာရောဂါ၊ ကယောင်ခြောက်ခြား ရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ကိုက်လန်များများ စားပေးပါက နှလုံးရောဂါရှင်တွေအတွက် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပြီး မဖြစ်သေးသူတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကိုလက်စထရောဓာတ်ကို လျှော့ချစေနိုင်တဲ့ ဟင်းလျှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုက်လန်မှာပါတဲ့ ဗီတာမင် A
အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဗီတာမင် A ဟာ အသားအရည်ကိုလည်း ချောမွတ်သန့်စင်စေသလို အဆုတ်ကင်ဆာ၊ သာအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကိုက်လန်မှာပါတဲ့ ဗီတာမင် C
ဗီတာမင် C ဟာ သွေးဖိအားကို ထိန်းညှိပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စွမ်းအားတွေလည်း ပေးပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေလို့ ဝိတ်ကိုလည်း ကျစေပါတယ်။
ကိုက်လန်ရဲ့ ထူးခြားချက်က နွားနို့ထက်ပင် ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင်မှု ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရိုးကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပြီး osteoporosis ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကိုက်လန်မှာ အမျှင်ဓာတ်နဲ ဆာလဖာဓာတ် ပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်အတောက် ဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသဲကျန်မာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ, သတင်း LeaveaComment on ကိုကျလနျ
ကိုဗဈကပျကွား ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှရေဲ့ ဒုက်ခ
Posted on December 17, 2020 December 17, 2020 by Shangyi
ကငျ‌ဆာအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဒသေအသီးသီးကနေ ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးကို လာရောကျဆေးကုသသူမြားအနဖွေငျ့ ကှာရနျတငျးဝငျရနျအခကျအခဲ ၊ ခရီးစရိတျအခကျအခဲမြားကွောငျ့ နရေပျသို့မပွနျနိုငျဘဲ ဆေးရုံကွီး ဝနျးကငျြ‌ မှာ နထေိုငျကွရသလို စားဝတျနရေေးအခကျအခဲလညျး ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။
“ဒီမှာဆေးလာကုတာ အပတျတိုငျး ကုရတယျ။ လာတုနျးက လူနာတငျယာဉျကားနဲ့လာကွတာပေါ့။ ပွနျဖို့တော့ ကိုယျ့စားရိတျနဲ့ ကိုယျပွနျရမှာလေ။ ကားခက ဈေးကွီးတယျ။ ပွီးတော့ တဈခါတလလေညျးမဟုတျဘူး။ အပတျတိုငျးဆိုတော့ အဆငျမပွဘေူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီဆေးရုံဘေးမှာပဲဖွဈသလိုနကွေရတာပေါ့” လို့ဆေးလာကုသူတဈဦးက ‌ပွောပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ ဆေးရုံကွီးဘေး နထေိုငျသူ အမြားအပွားရှိပွီး စား‌ရေးသောကျရေးအတှကျ နရေပျမှ ပါလာသမြှကို ထုခှဲရောငျးခနြကွေပွီးဖွရှေငျးနကွေရပါတယျ။
တခြို့ကတော့ အလှူရှငျမြားလာရောကျလှူဒါနျးမှုပျေါမှာ မှီခိုနရေပါတယျ။
ကိုဗစ်ကပ်ကြား ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ဒုက္ခ
ကင်‌ဆာအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒေသအသီးသီးကနေ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို လာရောက်ဆေးကုသသူများအနေဖြင့် ကွာရန်တင်းဝင်ရန်အခက်အခဲ ၊ ခရီးစရိတ်အခက်အခဲများကြောင့် နေရပ်သို့မပြန်နိုင်ဘဲ ဆေးရုံကြီး ဝန်းကျင်‌ မှာ နေထိုင်ကြရသလို စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲလည်း ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
“ဒီမှာဆေးလာကုတာ အပတ်တိုင်း ကုရတယ်။ လာတုန်းက လူနာတင်ယာဉ်ကားနဲ့လာကြတာပေါ့။ ပြန်ဖို့တော့ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ ကိုယ်ပြန်ရမှာလေ။ ကားခက ဈေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတလေလည်းမဟုတ်ဘူး။ အပတ်တိုင်းဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီဆေးရုံဘေးမှာပဲဖြစ်သလိုနေကြရတာပေါ့” လို့ဆေးလာကုသူတစ်ဦးက ‌ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဆေးရုံကြီးဘေး နေထိုင်သူ အများအပြားရှိပြီး စား‌ရေးသောက်ရေးအတွက် နေရပ်မှ ပါလာသမျှကို ထုခွဲရောင်းချနေကြပြီးဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။
တချို့ကတော့ အလှူရှင်များလာရောက်လှူဒါန်းမှုပေါ်မှာ မှီခိုနေရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Nyein Chan Oo / MPA
Posted in သတင်း LeaveaComment on ကိုဗဈကပျကွား ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှရေဲ့ ဒုက်ခ
ပဒိုငျးသီးအကွောငျးကို ပွညျ့စုံစှာ ထပျမံဖျောပွပေးခငျြပါတယျ
Posted on December 14, 2020 December 14, 2020 by Shangyi
ပဒိုငျးသီးကို Datura metel/Jimson weed/devil’s trumpet စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးချေါတှငျကွတယျ။
ဒီအပငျဟာ သဘာဝအလကေ့ပြေါကျတဲ့အပငျဖွဈသညျ့အလြောကျ တဈပငျလုံးဟာ လူနှငျ့အခွားသော တိရိစ်ဆာနျတှကေို သစေနေိုငျတဲ့( tropane alkaloids) အဆိပျရှိပါတယျ။
အယျလျကာလှိုကျ(alkaloid)ဆိုတာက သဘာဝအလြောကျဖွဈပျေါနသေော အဆိပျတဈမြိုးဖွဈပွီး သူ့ကို အပငျတှကေနတေဆငျ့ ထုတျယူရရှိပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောအခုဖျောပွပေးထားတဲ့ ပဒိုငျးသီးမှာ အယျလျကာလှိုကျ အဆိပျမြားစှာ ရှိပါတယျ။It is prohibited to buy, sell, or cultivate Datura plants. အိန်ဒိယနိုငျငံမှာဆိုရငျ စိုကျပြိုးခွငျး၊ အရောငျးအဝယျပွုလုပျခွငျးမြားကို တားမွဈပိတျပငျထားပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၅၀ ခုနှဈ နှငျ့ ၁၉၆၅ ခုနှဈအတှငျး၌ ပဒိုငျးသီးကို စားသုံးကွခွငျးကွောငျ့ လူပေါငျး(၂၇၀၀)ကြျောခနျ့ အသကျသဆေုံးခဲ့တဲ့ မှတျတမျးတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဆုပျရငျဆူးမယျ၊ နမျးရငျလညျးမူးမယျ၊ စားမိပွနျရငျလညျးရူးတယျလို့ ဆိုရိုးစကားလေးရှိပါတယျ။ မှနျပါတယျ…သို့ပမေဲ့ မှားတာက ဘာလဲဆိုရငျ ဒီအပငျဟာ အဆိပျပငျ ဘာမြှအသုံးမဝငျဘူးဟု ယူဆထားတာတှဟော အလှနျမှားပါတယျ။
တကယျတော့ ပဒိုငျးပငျဟာ သဘာဝဆေးဖကျဝငျ အပငျတဈမြိုးထဲမှာပါဝငျပွီး ပဒိုငျးအစနေဲ့အရှကျဟာ ဆေးဖကျအရမျးဝငျပါတယျ။
သူ့အစနေဲ့အရှကျဟာ Datura seeds and leaves are used as antiasthmatic(ပနျးနာ) antispasmodic(ခြောငျးဆိုး) တိုကျဖကျြတဲ့ ဆေးဝါးအဖွဈ အသုံးပွုပွီးတော့ Hypnotic (အိပျငှခေ့ခြွငျး)နှငျ့ Narcotic (မူးယဈဆေး၊ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေော ဆေး)အဖွဈ အသုံးပွုကွပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျ နာကငျြကိုကျခိုကျခဲခွငျး၊ အရိုးအကျခွငျး၊ အရိုးကြိုးခွငျးမြား ဖွဈပျေါပါကလညျး ပဒိုငျးအရှကျကို မီးကငျပွီး ၎င်းငျးနရောမြား၌ ကပျပေးထားခွငျးဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျးပါတယျ။
ဒီအပငျကနတေဆငျ့ Hyopscyamine/Atropine နှငျ့ Scopolamine လို့ချေါတဲ့ ဓာတုဆေးဝါး (၃)မြိုးကို ထုတျယူရရှိပါသေးတယျ။ Hyopscyamine”ဆိုတဲ့ဆေးက အစာအိမျ၊အူ၊ကြောကျကပျနှငျ့အစာခဖြေကျြတဲ့ ဆေးဝါးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
Atropine “ဆိုတာက ထိုးဆေး(Injection)တဈမြိုးဖွဈပွီး အရေးပျေါ ထိုးသှငျးဆေး တဈမြိုးပါ။ အဓိကက နှလုံးခုနျမမှနျ၊နှလုံးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အသကျကယျဆေးတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ Scopolamine”ဆိုတာကလညျး ထိုးဆေးတဈမြိုးဖွဈပွီး မအီမသာဖွဈခွငျး၊ အနျခွငျးနှငျ့ ဖြားခွငျး၊ နာခွငျးတှအေတှကျ ထုတျလုပျထားတဲ့ ဓာတုဆေးတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ပဒိုငျးပငျဟာ (သုံးတတျရငျဆေး၊ မသုံးတတျရငျဘေး)ဆိုတာ အားလုံးနားလညျ သဘောပေါကျသှားပွီးလို့ ကြှနျတျော ယုံကွညျပါတယျ။ ဒီထကျအကယျြတဝငျ့ ရေးသားဖျောပွပေးလို့ရပါတယျ…သို့ပမေဲ့ ကြှနျတျောလညျး အခြိနျသိပျမရဘူး မိတျဆှတေို့ကိုလညျး စာတှအေမြားကွီး ပေးမဖတျဘူး လိုရငျးနဲ့တိုရှငျး သိသှားဖို့သာ အရေးကွီးပါတယျ။
ပဒိုင်းသီးအကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာ ထပ်မံဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်
ပဒိုင်းသီးကို Datura metel/Jimson weed/devil’s trumpet စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်တွင်ကြတယ်။
ဒီအပင်ဟာ သဘာဝအလေ့ကျပေါက်တဲ့အပင်ဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်ပင်လုံးဟာ လူနှင့်အခြားသော တိရိစ္ဆာန်တွေကို သေစေနိုင်တဲ့( tropane alkaloids) အဆိပ်ရှိပါတယ်။
အယ်လ်ကာလွိုက်(alkaloid)ဆိုတာက သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ကို အပင်တွေကနေတဆင့် ထုတ်ယူရရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပဒိုင်းသီးမှာ အယ်လ်ကာလွိုက် အဆိပ်များစွာ ရှိပါတယ်။It is prohibited to buy, sell, or cultivate Datura plants. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၉၅၀ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၆၅ ခုနှစ်အတွင်း၌ ပဒိုင်းသီးကို စားသုံးကြခြင်းကြောင့် လူပေါင်း(၂၇၀၀)ကျော်ခန့် အသက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆုပ်ရင်ဆူးမယ်၊ နမ်းရင်လည်းမူးမယ်၊ စားမိပြန်ရင်လည်းရူးတယ်လို့ ဆိုရိုးစကားလေးရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်…သို့ပေမဲ့ မှားတာက ဘာလဲဆိုရင် ဒီအပင်ဟာ အဆိပ်ပင် ဘာမျှအသုံးမဝင်ဘူးဟု ယူဆထားတာတွေဟာ အလွန်မှားပါတယ်။
တကယ်တော့ ပဒိုင်းပင်ဟာ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်တစ်မျိုးထဲမှာပါဝင်ပြီး ပဒိုင်းအစေ့နဲ့အရွက်ဟာ ဆေးဖက်အရမ်းဝင်ပါတယ်။
သူ့အစေ့နဲ့အရွက်ဟာ Datura seeds and leaves are used as antiasthmatic(ပန်းနာ) antispasmodic(ချောင်းဆိုး) တိုက်ဖျက်တဲ့ ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးပြုပြီးတော့ Hypnotic (အိပ်ငွေ့ချခြင်း)နှင့် Narcotic (မူးယစ်ဆေး၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေး)အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ကိုက်ခိုက်ခဲခြင်း၊ အရိုးအက်ခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါကလည်း ပဒိုင်းအရွက်ကို မီးကင်ပြီး ၎င်းနေရာများ၌ ကပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းပါတယ်။
ဒီအပင်ကနေတဆင့် Hyopscyamine/Atropine နှင့် Scopolamine လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဆေးဝါး (၃)မျိုးကို ထုတ်ယူရရှိပါသေးတယ်။ Hyopscyamine”ဆိုတဲ့ဆေးက အစာအိမ်၊အူ၊ကျောက်ကပ်နှင့်အစာချေဖျက်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Atropine “ဆိုတာက ထိုးဆေး(Injection)တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရေးပေါ် ထိုးသွင်းဆေး တစ်မျိုးပါ။ အဓိကက နှလုံးခုန်မမှန်၊နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသက်ကယ်ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Scopolamine”ဆိုတာကလည်း ထိုးဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်းနှင့် ဖျားခြင်း၊ နာခြင်းတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဓာတုဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပဒိုင်းပင်ဟာ (သုံးတတ်ရင်ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင်ဘေး)ဆိုတာ အားလုံးနားလည် သဘောပေါက်သွားပြီးလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီထက်အကျယ်တဝင့် ရေးသားဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ်…သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်း အချိန်သိပ်မရဘူး မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း စာတွေအများကြီး ပေးမဖတ်ဘူး လိုရင်းနဲ့တိုရှင်း သိသွားဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။
ရေးသားသူ–Win Min Phyo
Posted in သတင်း LeaveaComment on ပဒိုငျးသီးအကွောငျးကို ပွညျ့စုံစှာ ထပျမံဖျောပွပေးခငျြပါတယျ
ရနျကုနျ-မန်တလေးအမွနျလမျးပျေါတှငျ ကုနျတငျကားကွီးမြား ယာယီ ဖွတျသနျးသှားလာခှငျ့အား ယခုလကုနျတှငျ ရပျဆိုငျးမညျ
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 by Shangyi
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်တွင် ကုန်တင်ကားကြီးများ ယာယီ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်အား ယခုလကုန်တွင် ရပ်ဆိုင်းမည်
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင်ကုန်တင်ကားကြီးများ ယာယီ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ခွင့်ပြုထားမှုကို ယခုနိုဝင်ဘာလကုန်တွင် ရပ်ဆိုင်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန (ထိန်းသိမ်းရေး)ထံမှသိရသည်။
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ် ကာလအတွင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် မြို့အဝင်အထွက်ကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် အောက်တိုဘာ(၅)ရက်မှစတင်၍ အဝေးပြေး ကုန်တင်ယာဉ်များ အားလုံးကို ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်မှ သတ်မှတ် အမြန်နှုန်းအတိုင်း ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်ခွင့် ပြုပေးခဲ့ပြီး ယခုနိုဝင်ဘာလကုန်တွင်ဖြတ်သန်းခွင့် ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
” ကြေညာချက် ထုတ်ထားပေမယ့်လည်း လကုန်ပြီးရင်တော့ ကိုဗစ် အခြေအနေအပေါ်တော့ မူတည်တယ် ၁၄ ဘီးအောက်တော့ယာဉ်တွေတော့ ဆက်ဖြတ်ခွင့်ပြုပေးမယ့် သဘောပေါ့ ” ဟု လမ်းဦးစီးဌာန (ထိန်းသိမ်းရေး) ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးသောင်းမြင့်ထွန်း က ပြောသည်။
(၁၄)ဘီးအထက် မော်တော်ယာဉ်များကို နိုဝင်ဘာ(၃၀)ရက် ည(၁၂)နာရီမှ စတင်ကာ အမြန်လမ်းပေါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားလာ မောင်းနှင်ခြင်း ခွင့်ပြုတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီး (၁၄)ဘီးအောက် ကုန်တင်ယာဉ်များကိုမူ ဆက်လက်ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၁၄ ဘီးနှင့်အထက် ကုန်တင်ယာဉ်များကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်းမှ ပြန်လည် သွားလာမောင်းနှင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်များရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၌ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များအား သတ်မှတ်ထားသည့် မြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖြစ်သည့် ဒင်္ဂါးချောင်း၊ နှာပေါက်ဝ၊ ဝက်ဝံ၊ သီးကုန်း၊ ကျွဲတပ်ဆုံ၊ ပခုက္ကူတံတား၊ စဥ့်ကူတိုက်နယ်၊ ကောင်းမွန်၊ ပေပင်လေး၊ သဲကွဲ စသည့်ဂိတ်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ရှိမရှိကို Rapid Test Kit ဖြင့် စစ်ဆေးပေး လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျလမျးပျေါတှငျကုနျတငျကားကွီးမြား ယာယီ ဖွတျသနျးသှားလာရနျ ခှငျ့ပွုထားမှုကို ယခုနိုဝငျဘာလကုနျတှငျ ရပျဆိုငျးတော့မညျ ဖွဈကွောငျး ဆောကျလုပျရေး ဝနျကွီးဌာန လမျးဦးစီးဌာန (ထိနျးသိမျးရေး)ထံမှသိရသညျ။
COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားစဉျ ကာလအတှငျး ကုနျစညျပို့ဆောငျရေး လုပျငနျးမြားနှငျ့ မွို့အဝငျအထှကျကိစ်စမြား အဆငျပွစေရေနျအတှကျ အောကျတိုဘာ(၅)ရကျမှစတငျ၍ အဝေးပွေး ကုနျတငျယာဉျမြား အားလုံးကို ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျလမျးပျေါမှ သတျမှတျ အမွနျနှုနျးအတိုငျး ဖွတျသနျး မောငျးနှငျခှငျ့ ပွုပေးခဲ့ပွီး ယခုနိုဝငျဘာလကုနျတှငျဖွတျသနျးခှငျ့ ပွနျလညျပိတျသိမျးရနျ စီစဉျခွငျး ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
” ကွညောခကျြ ထုတျထားပမေယျ့လညျး လကုနျပွီးရငျတော့ ကိုဗဈ အခွအေနအေပျေါတော့ မူတညျတယျ ၁၄ ဘီးအောကျတော့ယာဉျတှတေော့ ဆကျဖွတျခှငျ့ပွုပေးမယျ့ သဘောပေါ့ ” ဟု လမျးဦးစီးဌာန (ထိနျးသိမျးရေး) ဒုတိယ ညှနျကွားရေးမှုးခြုပျ ဦးသောငျးမွငျ့ထှနျး က ပွောသညျ။
(၁၄)ဘီးအထကျ မျောတျောယာဉျမြားကို နိုဝငျဘာ(၃၀)ရကျ ည(၁၂)နာရီမှ စတငျကာ အမွနျလမျးပျေါမှ ဖွတျသနျးသှားလာ မောငျးနှငျခွငျး ခှငျ့ပွုတော့မညျ မဟုတျကွောငျး ဆောကျလုပျရေး ဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျကွညောထားပွီး (၁၄)ဘီးအောကျ ကုနျတငျယာဉျမြားကိုမူ ဆကျလကျဖွတျသနျး မောငျးနှငျခှငျ့ပွုမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
၁၄ ဘီးနှငျ့အထကျ ကုနျတငျယာဉျမြားကို ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ စံလမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့ အညီ ရနျကုနျ-မန်တလေး လမျးဟောငျးမှ ပွနျလညျ သှားလာမောငျးနှငျရနျ စီစဉျထားကွောငျး သိရသညျ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး မွို့နယျမြားရှိ စဈဆေးရေးဂိတျမြား၌ ကုနျတငျယာဉျမောငျးနှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျမြားအား သတျမှတျထားသညျ့ မွို့ဝငျစဈဆေးရေးဂိတျမြားဖွဈသညျ့ ဒင်ျဂါးခြောငျး၊ နှာပေါကျဝ၊ ဝကျဝံ၊ သီးကုနျး၊ ကြှဲတပျဆုံ၊ ပခုက်ကူတံတား၊ စဉျ့ကူတိုကျနယျ၊ ကောငျးမှနျ၊ ပပေငျလေး၊ သဲကှဲ စသညျ့ဂိတျမြားတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုး ရှိမရှိကို Rapid Test Kit ဖွငျ့ စဈဆေးပေး လကျြရှိကွောငျးသိရသညျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ရနျကုနျ-မန်တလေးအမွနျလမျးပျေါတှငျ ကုနျတငျကားကွီးမြား ယာယီ ဖွတျသနျးသှားလာခှငျ့အား ယခုလကုနျတှငျ ရပျဆိုငျးမညျ
ဆောငျးတှငျးမှာ ကိုဗဈပိုတိုးနိုငျတာကွောငျ့ မလိုအပျပဲအိမျပွငျမထှကျဖို့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနတိုကျတှနျး
Posted on November 20, 2020 November 20, 2020 by Shangyi
ဆောင်းတွင်းမှာ ကိုဗစ်ပိုတိုးနိုင်တာကြောင့် မလိုအပ်ပဲအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတိုက်တွန်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်ပဲအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ နေအိမ်မှာ အတက်နိုင်ဆုံးနေကြဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဒီနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လူစုလူဝေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းတွေ နေ့စဉ်ပြန်မြင့်လာနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ တော်တော်လေးလျှော့ကျသွားပေမယ့် အခုရက်ပိုင်း တနေ့ကို လူနာသစ် (၁၆၀၀) နီးပါးအထိ ပြန်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောင်းရာသီကူးပြောင်းချိန်ဖြစ်တာမို့ ရောဂါပြန့်ပွားမှု ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးဌာနက သတိပေးပါတယ်။
မလိုအပ်ပဲခရီးသွားတာ၊ လူစုလူဝေးတွေလုပ်တာရှောင်ကြဖို့နဲ့ မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဖို့လည်းဆိုထားပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ် နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းတွေ တက်လာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့က ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ သတိပေးထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာလ(၅) ရက်နေ့အထိ နေအိမ်မထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ဖို့ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် ဘယ်တိုင်းဒေသတွေမှာ ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုတာကို အစိုးရကမကြေညာသေးပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ကျရောက်မယ့် ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရက်တွေမှာ လူ ၅၀ ထက်မပိုဘဲ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဝတ်ပြု ဆုတောင်းခွင့်ရှိမယ်လို့ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုရားပုထိုးစေတီတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဗလီနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေမှာ တလလေးကြိမ် ဥပုသ်သီလဆောက်တည်နိုင်၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းနိုင်ပေမယ့် လူ ၃၀ ထက်မပိုရလို့ သတ်မှတ်ဖို့ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူ စုစုပေါင်း (၇၄၈၈၂) ယောက် ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့သူက စုစုပေါင်း (၅၅၆၃၃) ယောက် ရှိပါပြီ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျတားဆီးနိုငျရေးအတှကျ မလိုအပျပဲအိမျပွငျမထှကျဘဲ နအေိမျမှာ အတကျနိုငျဆုံးနကွေဖို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ဒီနတေို့ကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲအပွီး လူစုလူဝေးတှေ ဖွဈပျေါခဲ့ပွီးနောကျ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးတှေ နစေ့ဉျပွနျမွငျ့လာနတေဲ့အခြိနျမှာ အခုလိုတိုကျတှနျးလိုကျတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျအတှငျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရသူ တျောတျောလေးလြှော့ကသြှားပမေယျ့ အခုရကျပိုငျး တနကေို့ လူနာသဈ (၁၆၀၀) နီးပါးအထိ ပွနျတိုးလာတာဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဆောငျးရာသီကူးပွောငျးခြိနျဖွဈတာမို့ ရောဂါပွနျ့ပှားမှု ပိုဖွဈနိုငျတယျလို့လညျး ကနျြးမာရေးဌာနက သတိပေးပါတယျ။
မလိုအပျပဲခရီးသှားတာ၊ လူစုလူဝေးတှလေုပျတာရှောငျကွဖို့နဲ့ မဖွဈမနအေပွငျထှကျရရငျ နှာခေါငျးစညျးတပျဖို့လညျးဆိုထားပါတယျ။
နောကျတဈပတျ နှဈပတျအတှငျးမှာ ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးတှေ တကျလာနိုငျကွောငျး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက နိုဝငျဘာ (၁၆) ရကျနကေ့ ပွောကွားတဲ့ မိနျ့ခှနျးမှာ သတိပေးထားပါတယျ။
နိုဝငျဘာလ (၂၁)ရကျနကေ့နေ ဒီဇငျဘာလ(၅) ရကျနအေ့ထိ နအေိမျမထှကျရအမိနျ့ ထုတျပွနျဖို့ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသရေး အမြိုးသားအဆငျ့ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေးမှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပမေယျ့ ဘယျတိုငျးဒသေတှမှော ဒီအမိနျ့ထုတျပွနျမယျဆိုတာကို အစိုးရကမကွညောသေးပါဘူး။
ဒီဇငျဘာလထဲမှာ ကရြောကျမယျ့ ခရဈစမတျနဲ့ နှဈသဈကူးပှဲတျောရကျတှမှော လူ ၅၀ ထကျမပိုဘဲ ဘုရားကြောငျးတှမှော ဝတျပွု ဆုတောငျးခှငျ့ရှိမယျလို့ အဲ့ဒီအစညျးအဝေးမှာဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
ဘုရားပုထိုးစတေီတှေ၊ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှေ၊ ဗလီနဲ့ ခရဈယာနျဘုရားကြောငျးတှမှော တလလေးကွိမျ ဥပုသျသီလဆောကျတညျနိုငျ၊ ဝတျပွုဆုတောငျးနိုငျပမေယျ့ လူ ၃၀ ထကျမပိုရလို့ သတျမှတျဖို့ရှိပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ရောဂါကူးစကျခံရတဲ့သူ စုစုပေါငျး (၇၄၈၈၂) ယောကျ ရှိသှားပွီဖွဈပွီးတော့ ပွနျလညျသကျသာလာတဲ့သူက စုစုပေါငျး (၅၅၆၃၃) ယောကျ ရှိပါပွီ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ဆောငျးတှငျးမှာ ကိုဗဈပိုတိုးနိုငျတာကွောငျ့ မလိုအပျပဲအိမျပွငျမထှကျဖို့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနတိုကျတှနျး